नारी समानता वा नारी सम्मान – सुबास ढकाल नर्थ क्यारोलिना - Enepalese.com
नारी समानता वा नारी सम्मान – सुबास ढकाल नर्थ क्यारोलिना
इनेप्लिज २०७४ फागुन २८ गते १:४८ मा प्रकाशित
आश्चर्य लाग्छ ! घरमा एक गिलास पानी नथापेर खाने पुरुषले नारी सम्मानको कुरा गर्छन । आश्चर्य लाग्छ घरमा पुरुषका हरेक आदेशलाइ धर्म मानी शिरोपर गर्ने महिलाले नारी सम्मानको कुरा गर्छन । किन यस्तो देखावटी पन ? सम्मान गर्नु छ, सहयोग गर्नु छ, साथ दिनु छ भने आफैंवाट, आफ्नै घरवाट शुरु गर्नु पर्छ, होइन र ?
नारी सम्मान, पुरुष सम्मान भन्दा पनि नारी-पुरुष समानता भन्नु पर्ने होइन र ? घर-परिवार-समाज-पेशा सबैको जिम्मेवारी पुरुष र नारीले समानरुपमा उठाउनु पर्ने होइन र ?
कुरीति र कुसंस्कार हटाउन पहल गर्नु पर्ने होइन र ? अवश्य हो | तर हामीले गरेका छैनौ । तर मलाई एउटा कुराले गर्व लाग्छ मैले मेरो घरमा चै शुरुवात गरे । मेरो घरमा म मात्र पुरुष हुँ , मेरा दुइजना छोरी छन् । मलाई जैले पनि लाग्छ मेरी श्रीमती र मेरी छोरीहरु मेरो सम्मानको होइन कि समानताको हकदार छन् । हामी समान छौं । हामी मिलेर सबै काम गर्छौं ।
म एउटा कट्टर रुढिवादी परिवारमा हुर्के । महिनावारी हुँदाखेरी मेरो आमा र दिदीहरुले भोगेका दु:खहरु कहिले पनि राम्रो लागेनन । म पनि धार्मिक भावनाको मान्छे हुँ, संस्कृत पढ्न जान्दछु, चिना हेर्न जान्दछु, हात हेर्न जान्दछु, गायत्री मन्त्र जप्छु । तर, महिनावारी जस्तो कुरीति चैं मान्दिन । १० वर्ष कि मेरी छोरी महिनावारी हुँदा हामीले आफ्नै कोठामा राख्यौ आफैसंग सुतायौ ।
रुढिवादी एवं कट्टरपन्थी अभिवाहकलाइ भन्दा पनि भनेनौ । आमाले सरसफाई सम्बन्धि सबै कुरा सिकाइन अनि भोलि पल्टै देखि स्कूल पठायौ । मेरी छोरीले यो कुरा पछि आफ्ना साथिलाइ भनिन अनि ति साथीहरु पछि महिनावारी हुँदा आफ्ना अभिभावक संग लडे, कोहि भोलि पल्टै देखि स्कूल आए, कोहि दुइचार दिन कोठामा एक्लै थुनिनु पर्ने सजाय भोगेर आए । कसैले सजाय पाए कसैको कम भयो, तर हाम्रो कदमले अरुको घरमा पनि शुरुवात भने गर्यो ।
माफ गर्नुहोला कहिलेकाहीं त म नारीको पनि गल्ति देख्छु । मेरो एकजना दाजु भाउजु पर्ने हुनुहुन्छ । दाजुलाई पानी ऒछ्यानमा नै टक्राउनु हुन्छ भाउजु, ख्वाक्क खोक्न हुदैन कोपरा लिएर पुग्नुहुन्छ, अलिकति जिउ दुख्न हुदैन औषधि मालिश थाली हाल्नु हुन्छ ।
ति दाइ त उमेरनै नभई बुढो भै सक्नु भो । त्यति धेरै हेरविचार पनि गर्नु पर्छ र ? फेरी ति दाइ पहिला त्यस्तो हुनुहुन्थेन, आफ्नो काम हरु गर्नु हुन्थो, जागरिलो नै हुनुहुन्थो । तर अहिले त केहि गर्नु हुन्न । रोगको भकारी पनि हुनुभको छ । भाउजुले गरेको सहि हो र ? आफैं विचरा पति लाइ परमेश्वर बनाइदिनु भो । ति दाइले पनि आफैं अघि बढेर आफ्नो काम, घरको काम गरिदिए पनि हुन्थो नि, आफ्नै स्वास्थ्य राम्रो हुन्थो ।
मर्दको दर्द नही होता । हाम्रो समाज पनि अचम्मको छ । दु:खमा पिडामा एउटा पुरुष मन खोलेर रुन पनि पाउदैन । हैट ! यो त आइमाई पो भए छ भन्छन । होइन पुरुषको चैं मन हुदैन, भावना हुदैन । दु:ख पर्दा मन खोलेर रुन दिए उसको मन को पिडा पनि कम हुन्थो नि । तर के भन्नु मर्दको दर्द नही होता रे । म त भन्छु दु:खमा, पिडामा, शोकमा मन खोलेर रुन पाउनु पर्छ सबैले अनि पो पिडा शान्त हुन्छ ।
त्यसैले म सम्मानको होइन समानताको पक्षधर हुँ । आफ्नी श्रीमतीलाई, दिदि-बैनीलाइ, छोरी-बुहारीलाइ, साथिलाइ सहयोग गरेर सम्मान गर्नुस । घरको काममा सहयोग गर्नुस । बाहिरको काममा संगै लिएर अघि बढ्नुस । कैले गरेको छैन भनेर लाज नमान्नुस ।
सानो तिनो बाट शुरु गर्नुस, तरकारी काटेर गर्नुस, चिया पकाई दिएर गर्नुस, लुगा धोएर गर्नुस |। सघाउनुस अनि महशुश गर्नुस कति खुशी प्राप्त हुन्छ । शुरु घरबाटै गर्नुस, कुनै गोष्ठीमा जानु पर्दैन बरु त्यो समय घरमा दिनुस |||||